Gamaggama Waajjiraalee Ministeerotaa_ Itoophiyaa | Kichuu
Posted on April 5, 2021 by kichuu_admin
Gamaggama Waajjiraalee Ministeerotaa_Itoophiyaa
Yeroo ammaa kana PPn kuftee jiraachuu ishee qabatamaan gamaggama waajjiraalee Ministeerotaa Muraasa haa ilaallu.
1. Ministeera RIB
Humni namaa fi baajatni RIB akkasumas meeshaaleen waraanaa waajjira ministeera kanaan hoogganamu hedduu miidhamee jira. Miseensotni hedduun ajjeefamaniiru, Kaanis gananiiru, Meeshaa heddhuun barbadaa’e,Kaanis saamamee guutummaa guutuutti sadarkaa birmadummaa biyya tokkoo eegsisu irratti hin argamu. Kana waan taheefis Sudaan daangaa Itoophiyaa seentee 64KMs qabattee jirti.
2. Ministeera Nageenyaa
Waajjiraaleen ministeera nageenyaatti kallattiin hidhata qaban kan akka Tika Biyyoolessaa fi INSA harka shaabiyaatti kufanii jiru. Kanaanis odeeffannoon caasaa isaa eeggatee fi amanamaan biyyaaf fayyadu hin argamu. Kana irraa kan ka’s Itoophiyaan biyya dursitee yakka ittisuu dandeessu osoo hin taane biyya erga ajjeechaan Jumlaa raawwatamee ibsa gaddaa baastu taatee jirti. Hojjettootni tikaa fi poolisootni naannoolee fi federaalaa hedduun hidhamaniiru. Kaanis walshakkii uumame irraa fedha isaaniin ala boqonnaa waggaa bahaniiru. Kaanis ajjeefamaniiru. Komishiniin nageenyaa abbootii amantaa of keessatti hammatee araaraa fi rakkoo daangaa furuuf dhaabbates hojii qabatamaa hojjechuu hin dandeenye. Kun kufaatii dabalataa fi guddaa Itoophiyaan keessa jirtu dha. Kana irraa kan ka’e hunduu fedhii isaan waan deemuuf dhaabbileen walabaa jedhaman kan akka mana mana murtii hojii isaanii bilisaan hin hojjetan. Kan manni murtii bilisa jedhe poolisiin hidhaatii hin baasu. Ibsituun kufaatii mootummaa guddaan kana dha.
3. Ministeera Barnootaa
Ministeerri barnootaa keessumaa dhaabbileen barnootaa olaanoon,Yuunivarsiitiileen hanqina baajataan rakkachaa jiru. Barattootaaf nyaata dhiyeessuuf baajata qabame qaala’insi jireenyaa waan jeeqeef Yuunivarsiitiin sadarkaa barattootaaf nyaata dhiyeessuu hin dandeenyee fi meeshaalee barnootaa dhiyeessuu hin dandeenye irra gaheera. Kana ilaalchisees Pirezedaantotni Yuunivarsiitiilee yeroo ammaa komii dhiyeessaniin koreen dhaabbii walgahii irratti argama. Dabalataan qormaatni barattootaa yeroo sororamu dogoggoraa fi itti gaafatamummaan kan itti hin dhagahamne taheera. Dabalataan Maqalee fi Matakkal keessatti barattootni kutaa 12ffaa qormaata fudhatan hin jiran. Kunis barattoota baay’inni isaanii kuma 45 caalu jechuu dha.
4. Ministeera Hawaasumaa, Maallaqaa fi Daldalaa
Qaala’insi jireenyaa Itoophiyaa keessaa sadarkaa gaaga’ama geessisu irra jiraachuu duwwaa osoo hin taane,Itoophiyaa keessatti hojii dhandummaa fi buqqaatotni humnaa ol jiraachuun, malaammaltummaan ija baase jiraachuun kufaatii Itoophiyaa isa dabalataa fi Ijoo dha. Gatiin sharafa maallaqa Itoophiyaa gad bu’uu fi seermaleessumaan sochii dinagdee tohannaa mootummaan ala jira.
5. Ministeera Dhimma Alaa
Akkuma Beekamu yeroo ammaa Itoophiyaan kufaatii dippiloomaasii guddaa keessatti argamti. Biyyootnii fi dhaabbileen Addunyaa akkasumas miidiyaaleen addunyaa gurguddaan guyyuu kufaatii Itoophiyaa irratti ibsa baasu. Kabajamuu mirga namummaa isaan yaachise ilaalchisuun dhaabbatni falma mirga namummaa guyyaatti ibsa baasa. Itoophiyaan biyya liqii kaffaluu hin dandeenye jettees galmeeffamtee liqiin irraa adda citeera.
Walumaa galatti PPn kuftee waan jirtuuf hanguma jirtu jabina isheen osoo hin taane tokkummaan xiyyeeffannoo kennuu dhabuu keenya irraa jirti. Yeroo ammaa kanas Itoophiyaan bulchisa Labsii Yeroo Hatattamaan garee ijaarameen (Command Post Military Administration Team) waraanaan bulaa jirti. Kanaaf,dhaabotni,Jaarmayaaleen, Aktivistootni,Hayyootni,Miidiyaaleen,Qeerroo fi Qarreen Oromoo tokkummaan furmaata waaraa Lammiileen Oromiyaa Jumlaan ajjeefamuu fi hidhamuu keessaa ittiin bahu Mootummaa Cehumsaa Biyyoolessa Oromiyaa haa ijaarru. Hundeeffama Qeerroo Bilisummaa Oromoo Waggaa 10ffaa fi Guyyaa Gootota Oromoo,Ebla 15, 2021 yoommuu kabajnu bakka hundattis irbuu Gootota Oromoo Qabsoof wareegamanii yaadachuun taha
Injifannoo Uummata Bal’aaf
Oromticha Galaan Maccaa
Iccitii Simbirtuu Ganamaa! Masaraan jeeqamaa jirti!